4.3 Android Speed ​​Up égwu S
Part 1. Olee ọcha ihe iPad ihuenyo
Ebe ọ bụ na iPad nwere a siri ihuenyo na eleezie ọ nwere na-metụrụ oge niile iji na-emekọ ihe ya, ọ na-aghọ mkpa na-ike na-elekọta mgbe ọ na-abịa nhicha ihuenyo n'emebighị ya.
Ọcha ihuenyo nke onye iPad, ị kwesịrị ị na:
• Zuru gbanyụọ gị iPad.
• Get a obere ntuziaka ikuku ikuku mmiri (ihe yiri ihe ink-dropper).
• Get a lint-free adụ ákwà ma ọ bụ na microfiber ákwà na e Ẹnam ekese tinyere iPad onwe ya.
Iji zere ọ bụla emebi ma ọ bụ na-agazighị agazi gị iPad, ị kwesịrị ị na:
• Jiri ọ bụla siri ike ma ọ bụ abrasive ihe onwunwe dị ka akwụkwọ towel, ákwà towel, wdg
• Jiri ọ bụla siri ike ngwọta dị ka window Cleaner, na mmanya, amonia, wdg
• Hichaa iPad ihuenyo mgbe ọ na-egosipụta ihe ma ọ bụ ngwaọrụ a kwadoro na na-agba ọsọ.
Ozugbo i enen niile n'elu ihe, na usoro nke nhicha ahụ iPad ihuenyo nyere n'okpuru nwere ike soro:
Gbaa mbọ hụ na iPad na agbanyụrụ.
Jiri ikuku ikuku mmiri ịfụ anya ọ bụla ájá (ma ọ bụ irighiri) si na ihuenyo zere ihe ọ bụla scratches nke ahụ nwere ike ime mgbe rubbing.
Nweta lint-free adụ ákwà (ma ọ bụ microfiber ákwà) ubé keguru mmiri.
Malite rubbing keguru mmiri ákwà jiri nwayọọ na ihuenyo na okirikiri ngagharị.
Cheta na: Ị nwere ike ịdị na rubbing usoro otutu ugboro ruo mgbe ihuenyo ọkọkpọhi n'ụzọ zuru ezu dị ọcha.
Mkpa: Ọ bụrụ na nke ọ bụla mishap (dị ka ọ bụrụ na ụfọdụ tụlee nke mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwọta banye ọ bụla nke oghere nke iPad), ị ga-eleta ndị kacha nso Apple Service Center ma ọ bụ onye Apple Retail Echekwala na mpaghara gị ebe ozugbo.
Part 2. Olee ọcha iPad Smart Cover na Smart Ileba
Ebe ọ bụ na Smart Cover na Smart Ileba maka iPad dị na abụọ verities, usoro nke nhicha ha dị iche na ma ndị Filiks na-nyere n'okpuru:
Nhicha a Polyurethane Smart Cover / Smart Ileba:
Wepu iPad si ya cover / ikpe.
Get a lint-free adụ keguru mmiri ákwà.
Jiri nwayọọ ehichapụkwa n'ihu na n'ime nke ebe cover / ikpe na keguru mmiri na lint-free adụ ákwà.
Ọ bụrụ na ndị na-ebupụta nke ikpe / cover ka keguru mmiri, na-eche ruo mgbe ha nweta kpamkpam akọrọ.
Ebe ahụ iPad azụ ke cover / ikpe mgbe mere.
Nhicha a Akpụkpọ anụ Smart Cover / Smart Ileba:
Get a adụ ọcha ákwà damped na mmiri ọkụ na ụfọdụ aka-ncha etinyere na ya.
Hichaa akpụkpọ anụ na ákwà.
Get a adụ keguru mmiri lint-free ákwà.
Jiri nwayọọ ehichapụkwa n'ihu na n'ime nke ikpe / cover na lint-free ákwà.
Chere ruo mgbe niile dampness na-arahụ si cover / ikpe.
Ebe ahụ iPad azụ ke cover / ikpe.
Part 3. Olee ọcha Your Old iPad
Na mgbakwunye na nhicha ahụ iPad ihuenyo na ya cover na iji n'elu kọwara ụzọ, ị ga-chọrọ ọcha ya esịtidem nchekwa iji na-eji ngwaọrụ gị iji na-enwe kasị mma na ọrụ ahụmahụ. Nhicha gị ochie iPad si esịtidem ebe nchekwa na-enye gị na-echekwa ihe (ọhụrụ) data na ya na-eji ngwaọrụ dị ka kwa gị mkpa.
Ọ bụ ezie na ị pụrụ ọcha gị ochie iPad si esịtidem ebe nchekwa aka site na iwepu ya na-achọghị data na / ma ọ iwepu ejibeghi ngwa, ọrụ nwere ike ịbụ tedious, oge na-ewere, na mgbe ụfọdụ pụrụ ịghọ ihe ịma aka. Iji kpochapụ okwu ndị a, ọ na-atụ aro ka ị na-aga n'ihi a-atọ ndị ọzọ na ngwa na-nwere ike mfe gị dum iPad si ebe nchekwa cleanup usoro, na nwere ike ịzọpụta gị ezigbo ego nke oge dị ka mma.
Mgbe-ekwu okwu banyere ihe ngwa ọcha gị ochie iPad si ebe nchekwa, otu nke kasị mma na dị taa na ahịa bụ Wondershare SafeEraser.
SafeEraser site Wondershare bụ a shareware nwere ike ibudata site na ya ukara website. The ngwa bụ dị ka a ikpe mbipute maka Windows ọrụ na otu ugboro hụrụ oru oma, ọ nwere ike zụta si ere si saịtị ahụ site na-akwụ ụgwọ maka ya ikike online.
Wondershare SafeEraser bụ maka iOS ọrụ na bụ ike nke na erasing na-achọghị data dị ka onye ozi, ejibeghi / achọghị ngwa, ehichapụ faịlụ, wdg Na mgbakwunye na iwepu data si iPads, SafeEraser nwekwara ike inyere ọrụ nweta ohere nchekwa site compressing foto na-echekwara na ngwaọrụ 'ebe nchekwa.
A ole na ole mkpa atụmatụ na Wondershare SafeEraser-enye gụnyere:
• Gwa nzacha na mkpocha - ịrụ a ngwa ngwa cleanup gị iOS ngwaọrụ.
• Photo Compressor - Iji mpikota onu na belata size nke oyiyi echekwara na ebe nchekwa. Nke a-enye gị ohere inweta ihe free ohere na gị iPhone / iPad.
• ejibeghi App Eliminator - Iji wepu ejibeghi ngwa site gị iPhone / iPad iji nweta gị ọzọ free ohere na ngwaọrụ gị.
• Ihichapu Private Data - Iji wepu niile gị onwe data gị iOS ngwaọrụ. Nwere ike ị chọrọ ịrụ a ụdị erasure mgbe ị na-eme atụmatụ n'aka-karịrị gị iPhone ma ọ bụ iPad na-amaghị onye.
• ihichapu ehichapụ faịlụ - Iji na-adịgide adịgide wepụ ehichapụ faịlụ site na nchekwa na iji mee ka ha na-abụghị recoverable bụla.
• Ihichapu All Data - Iji kpamkpam dị ọcha ngwaọrụ tupu ị na-ere ya anya ka onye na-amaghị onye na ịchọghị ka re-eji ya.
Na iji ọcha gị ochie iPad si esịtidem nchekwa, ị ga-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru:
Abanye na gị Windows PC eji ihe ọ bụla nchịkwa na akaụntụ.
Download Wondershare SafeEraser site na ịga na http://www.wondershare.com/iphone-data-eraser/guide.html na ịpị Gbalịa Ọ Free maka Windows button si n'elu nri akuku nke meghere ibe weebụ.
Ozugbo ebudatara, abụọ-pịa executable echichi faịlụ nke usoro ihe omume.
Site egosipụta ikwommiri ihuenyo, pịa Wụnye button na-eche ruo ngwa Nwela arụnyere na kọmputa gị.
Mgbe echichi zuru ezu, pịa Malite Ugbu a button si ikwommiri ihuenyo.
Ozugbo interface nke usoro ihe omume na-egosi, jikọọ gị iPad ka PC na iji eriri USB na Ẹnam ekese tinyere na ya na-eche ruo mgbe ngwaọrụ na-ahụrụ site ngwa.
Cheta na: Mgbe (Ọ bụrụ na) kpaliri n'ihi, na-aga site Apple Ngwa Nkwado ọkachamara na-omume na PC njikere ịchọpụta na njikọ iOS ngwaọrụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na emebeghị, download na wụnye iTunes na PC gị na mgbe kpaliri site Wondershare SafeEraser. (Ị nwere ike ileghara ngosi ọ bụrụ na gị PC ugbua nwere iTunes arụnyere n'ime ya.)
Mgbe niile bụ isi configurations na-mere na SafeEraser ọma na-achọpụta rụọ ejikọrọ iPad, pịa ihichapu niile Data nhọrọ si ekpe ngalaba nke interface. Cheta na: Alternatively ị nwekwara ike iji Photo Compressor, ejibeghi App Eliminator, ihichapu Private Data, na / ma ọ bụ ihichapu ehichapụ faịlụ atụmatụ ịkpọrọ data ọzọ granularly ihichapu.
Si nri ngalaba, pịa ihichapu Ugbu a bọtịnụ ka kpamkpam ihichapu niile data si gị ochie iPad Tupu ịmalite iji ya dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ (ma ọ bụ na-ere ya ka ọ na-amaghị onye). Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-adịghị ama zụtara usoro ihe omume, ị ga-egosipụta na ihe ọmụma igbe apostle ị ịzụta ikike. Mgbe ị zụrụ ikike, data mwepụ usoro ga-emezu ọma.
Site n'ịgbaso Filiks nyere n'elu, ị nwere ike nweta gị ochie iPad kpochara na njikere-eji dị ka a ọhụrụ na ngwaọrụ ọhụrụ.
> Resource> iPad> esi ọcha iPad